Iyo yekutanga beta ye macOS 10.13.5 vagadziri yava kuwanikwa | Ndinobva mac
Yekutanga macOS 10.13.5 yekuvandudza beta yave kuwanikwa
Vhiki rapfuura kuvhurwa kweChishanu chapfuura kweshanduro yekupedzisira yeMacOS High Sierra 10.13.4, vakomana vanobva kuCupertino vatangazve chirongwa che beta yazvino vhezheni yemacOS iripo pamusika uye vatangisa yekutanga macOS 10.13.5 yekuvandudza beta.
Semazuva ese, parizvino iyi beta yekutanga ye macOS 10.13.5 yakanangana nevagadziri, saka kana uri mushandisi weveruzhinji beta iwe uchafanirwa kumirira kusvika nhasi kana pamwe mangwana, kusvika Apple Vhura yekutanga yeruzhinji beta yeshanduro iyi.
Beta yekutanga yeMacOS High Sierra, ine nhamba 17F35e, inowanikwa kuburikidza neMac App Store, yevanogadzira chete. Panguva ino zvinoita kunge vakomana veCupertino ivo havana kuunza chero anokosha matsva, Panzvimbo iyoyo, ivo vari kutarisa mukuvandudza mashandiro uye kugadzikana kweicho chichava chimwe chekuvandudzwa kwazvino kuMacOS High Sierra, pamberi pekutanga kwebeta yekutanga yeiyo inotevera vhezheni yeMacOS, iyo yakarongerwa kuvhurwa mushure memusangano wekutanga we iyo Musangano weKuvandudza iyo Apple ichaita kutanga kwaJune gore rino.
Apple yakaburitsa vhezheni yekupedzisira ye macOS 10.13.4 munaKurume 29, kuunza yakagadziridzwa eGPU rutsigiro, izvo zvinoita kuti zvive nyore kubatanidza yekunze mifananidzo kuburikidza neThunderbolt 3 kubatana kuitira kuti uwedzere simba rekugadzirisa pamabasa anoda kuwanda kwemifananidzo yakadai semitambo, CAD kana chaiyo chaiyo yekushandisa / mitambo.
Yakaunzawo Bhizinesi Chat chinongedzo, chimiro icho inobvumira vashandisi kutaurirana kuburikidza neMessage app nemakambani uye kutotenga nekuvabhadharira neApple Pay Cash, chinhu chinowanikwa chete muUnited States. Chekupedzisira, iyi yazvino huru yekuvandudza kune macOS yakaunzawo pachena kujekesa zvine chekuita nekurapwa kweruzivo rwemunhu uye zvakavanzika zvedu, maficha matsva mukurongeka kwemabhukumaki, pamwe nekuvandudza mukuita, kugadzikana uye kuchengetedzeka kwesystem.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Mac Os X » Yekutanga macOS 10.13.5 yekuvandudza beta yave kuwanikwa
Nyowani nyowani dzePremiere Pro, Mushure meMhedzisiro, Kuongorora uye Hunhu Nyowani
Maitiro ekumisikidza edu mabhukumaki alfabheti muSafari